Super Arc Light waxaa lagu heli karaa bilaash wakhti xadidan | Wararka IPhone
Mar labaad waxaan kuu soo bandhigeynaa ciyaar cusub oo aad ku soo dejiso bilaash. Super Arc Light waxay ku leedahay qiimo joogto ah App Store-ka 1,99 euro, laakiin wakhti xaddidan, ayaan ku soo dejisan karnaa bilaash. Super lix geesoodle iyo joomatari dagaal ayaa ku milmay qori tuurkan arcade. Super Arc Light wuxuu ina soo bandhigayaa nidaam kontorool hal-badhan oo dhab ah kaasoo na siiya khibrad ciyaar toogasho ah leh hawo gadaal ah. Kani waa ciyaarta caadiga ah ee nagu xiri doonta kursiga saacado sacab sacab fiican leh illaa iyo inta aan batteri nagu filan ku haysanno qalabkeenna.
Inta lagu guda jiro horumarinta ciyaarta waa inaan isku daynaa inaan sii noolaano ilaa inta suurtagal ah adoo hoos u dhigeyna cadawga adag oo leh xawaare iyo saxnaan si loo helo dhibcaha ugu sareeya ee suurtogalka ah. Markaan ku sii socono horumarinta ciyaarta, waxaan yeelan doonnaa hub badan, oo mid walboo naga mid ah uu na siinayo saameyn muuqaal oo muuqaal ah oo iftiiminaya shaashadda baabi'ineysa kuwa kula tartamaya safarkayaga bannaan. Kooxda ka dambeysa horumarinta ciyaartan, oo leh No Code Studios Ltd, koox halyeey ah oo horumariyayaal ah, guuleystayaasha abaalmarinta BAFTA iyo cidda waxay iska kaashadeen horumarinta Shisheeyaha: Go'doonka.
1 Waxyaabaha Super Arc Light
2 Faahfaahinta Super Arc Light
Waxyaabaha Super Arc Light
Khibrad ciyaar degdeg ah iyo gadaal u dhac
Mowjadaha cadowga ee adag si looga adkaado
18 hubka furfuri kara
Saamaynta muuqaalka muuqaalka leh
Hub fara badan oo la furi karo
Faahfaahinta Super Arc Light
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: 04-05-2016
Cabir: 88.2 MB
La jaanqaadi macruufka 6.0 ama ka dib. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa iPhone, iPad iyo iPod Touch.
Waqtiga la daabacayo maqaalkan, ciyaarta waxaa loo heli karaa soo dejin sida gebi ahaanba bilaash ah oo aan lahayn wax iibsasho gudaha ah. Waxay u badan tahay in saacadaha la soo dhaafay, ciyaartu ay joojin doonto xoriyaddeeda, sidaa darteed waqti dheer kuma qaadan doonto soo dejiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Super Arc Light waxaa lagu heli karaa bilaash wakhti xadidan
Ciyaaraha TOP 15 ee loogu talagalay iPhone